Booliska: Sweden aad ugu bay liitada hubinta rakaabka diyaaradaha - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Booliska: Sweden aad ugu bay liitada hubinta rakaabka diyaaradaha
La daabacay tisdag 17 februari 2015 kl 11.16
Dawlada Sweden ayaa geed dheer iyo mid gaabanba u fuulaysa in la adkeeyo ammaanka garoomaada diyaaradaha ee Midawga Yurub, si loo ogaado oo loo xidho dadka lagu tuhunsan yahay falalka aragaggixisnimo.
Balse xaqiiqda ka jirta garoomada diyaaradaha Sweden ayaa middaas ka gedisan, Sweden ayaa aad ugu liidata in ay raacdo sharciyada la xidhiidha hubinta rakaabka diyaaradaha iyo basabooradooda.
Sweden ayaa hadda rabya in dhamaan shirkada diyaaraduhu ay macluumaadka rakaabkooda u gudbiyaan booliska, middaas oo hadda laga sameeyo waddamo badan oo ka tirsan Midawga Yurub, tusaale ahaan dhamaan safarada tegaya waddanka Maraykanka.
-Basaboorka ayaanu marinaa mashiinka, haddii wax kasta sax yihiin, qofku tigidhkiisa ayaanu eegna, ka dib waxaanu ka qabanaa shandadaha uu sito. Haddiise uu mishuunku soo saaro casaan marka la mariyo basaboorka, waxaanu u yeedhna dadka qaabilsan ammaanka, sidaa waxaa leh Anetta Carlsson, oo ka hawlgasha geggida diyaaradaha ee Arlanda.
Marka qofku ka dhoofaayo geggida diyaaradaha ee Arlanda, basaboorka ayaa la geliyaa mishiin, halkaas oo dhamaan macluumaadka qofka rakaabka ah uu mishiinku u diraayo hey’addaha Maraykanka, kuwaas oo eegaya in qofkani xaq u leeyahay in u dhoofo waddanka Maraykanka, oo aanu ku jirin liiska argaggixisada.
Sannadii 2004 ayaa Midawga Yurub dhaqan geliyay sharci si ogolaanaya in si atomatig ah loo keydiyo liiska magacyada dadka ka baxaya ama soo gelaya Yurub. Balse sharcigaas ayaan Sweden laga dhaqan gelin. Inkastoo boolisku uu magacyada rakaabka uu ka dalban karo diyaaradaha, balse ma jiraan macluumaad si atomatig loo kaydiyaa. Sida uu sheegaayo Thomas Jacobson, oo dhinaca ammaanka u qaabilsan diyaarada SAS.
– Sharciga keydinta macluumaadka rakaabku wuu ka shaqeeya waddamada kale ee EU, tusaale ahaan Faransiiska Boortaqiiska iyo Isbayn. Bale Sweden weli middaas kama suurto gelin. Ayuu leeyahay Thomas Jacobson.
Booliska Sweden ayaa qaba in Sweden ay ka dambayso waddamada Midawga Yurub intooda kale. Patrik Engström oo madax ka ah hawlgalada qaran ee booliska xuduudahaha Sweden
– Waxaan xaqiijin karaa uun in habkaasi uu yahay mid aan ka faa’idaysan lahayn. Waynu soo xarayn karnaa macluumaadkan si gooni gooni ah, balse middaas shaqo badan weeye, waxay ka wanaagsanaan lahayd in macluumaadkan aan si atomatig ah ugu shubno systamka, ayuu leeyahay Patrik Engström.